चर्को गितार- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
सन् १९६९ को जनवरीमा लेड जेपलिनले आफ्नै नाममा पहिलो एल्बम निकालेको थियो  । त्यसमा पहिलोपल्ट गितारको आवाजलाई चर्को रूपमा बढी महत्त्व दिइएको थियो  । त्यसपछि यो पश्चिमेली संगीतमा सर्वाधिक एल्बम बिक्री भएको ब्यान्ड सावित भयो । यसले ५० वर्ष छोएको छ ।
दोहोर्‍याएर भन्नै पर्छ, लेड जेपलिनको ‘स्टेरवे टु हेभन’ सुनेका छैनौ भने के गीत सुनेका छौ र ? निकै शक्तिशाली छ, यो गीत । रक म्युजिकको इतिहासमा यत्तिको बेजोड गीत पाइन्न होला पनि । यसलाई गीत होइन, एन्थम हो भनिन्छ । हाम्रोतिर पनि हेभी मेटल म्युजिक खुबै लोकप्रिय छ । यसको जग सन् सत्तरीको वरिपरि बसेको थियो र यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जस यही लेड जेपलिन ब्यान्डलाई दिनुपर्छ । लेड जेपलिनसँगै कुनै न कुनै रूपमा डिप पर्पल र ब्ल्याक साबाथ जोडिन्छ ।
यही तीन ब्यान्डकै कारण हेभी मेटल जन्मिएको मानिन्छ । सायद बढी प्रभाव लेड जेपलिनकै होला । त्यही ‘स्टेरवे टु हेभन’ फेरि सुन्नुपर्छ, त्यसले जसरी सुरुमा बिस्तारै गति लिन्छ र पछि जसरी यो गति बढ्दै जान्छ, भन्न सकिन्छ, सन् १९७१ यो गीत अहिलेका हेभी मेटल म्युजिकको जग हो । ‘काश्मीर’ र ‘होल लोटा लभ’ पनि यस्तै यस्तै छन् । त्यसो त लेड जेपलिनको चर्चा कहिले पनि सकिन्न, यसबारे कति मात्र कुरा गर्ने ? के–के बारे मात्र कुरा गर्ने ?
अहिले तत्काल यसको बढी चर्चा किन भइरहेको छ भने ब्यान्डले आफ्नो ५० वर्ष मनाइरहेको छ । यसै क्रममा ब्यान्डबारे पहिलो आधिकारिक डकुमेन्ट्री फिल्म पनि बन्दै छ र यो ५० वर्ष मनाउन नै हो । के हुन्छ त यसमा ? बास गितारिस्ट जोन पउल जोन्सले भनेका छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नै कथा हाम्रै मुखले भनेका छैनौं । अब सायद पालो आएको छ । यो डकुमेन्ट्रीले हाम्रो वास्तविक कथा बाहिर ल्याउनेछ ।’
अहिले यो पोस्ट–प्रोडक्सनमा छ र यसलाई लेड जेपलिनका प्रशंसकले मात्र होइन, पश्चिमेली संगीत मन पराउने सबैले व्यग्र प्रतीक्षा गर्नेछन् । यसका निर्देशक हुनेछन्, ब्रिटिस फिल्म मेकर बर्नाड म्याकमहन । उनकै भाषामा यसमा ब्यान्डको पूरा इतिहास भने हुने छैन, बरु ब्यान्ड लोकप्रियताको शिखरमा पुग्यो, त्यसको कारण खोज्ने प्रयास हुनेछ । त्यसको अर्थ यसमा सबैभन्दा बढी चर्चा स्वाभाविक रूपमा त्यही ‘स्टेरवे टु हेभन’ को हुनेछ । यसमा जोन्ससँगै ब्यान्डका फ्रन्टम्यान जिम्मी पेज र रोबर्ट प्लानले आफ्नो कथा भन्ने छन् । खाली ड्रमर जोन बोनहमले मात्र यो काम गर्ने छैनन्, किनभने उनी आफैं ‘हेभन’ पुगिसके भनिन्छ । सन् १९८० मा ३२ वर्षकै उमेरमा उनको निधन भएको थियो र यससँगै लेड जेपलिन आफैं ‘डिसब्यान्ड’ भएको थियो । भलै त्यसयता ब्यान्डका अरू तीन साथी एकै स्थानमा बसेर गीत प्रस्तुत नगरेका पनि होइनन् । वास्तवमै त्यसपछि लेड जेपलिन सदाका लागि रहेनन् । बोनहमको निधन भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर पनि ब्यान्डको चर्चा अझै उत्तिकै छ । यसले पनि देखाउँछ, वास्तवमै लेड जेपलिन कति धेरै लोकप्रिय छ भनेर । सन् १९६९ को जनवरीमा लेड जेपलिनले आफ्नै नाममा पहिलो एल्बम निकालेको थियो । त्यसमा पहिलो पल्ट गितारको आवाजलाई चर्को रूपमा बढी महत्त्व दिइएको थियो । त्यसपछि त इतिहास नै बन्यो र ब्यान्ड पूरा पश्चिमेली संगीतमा सर्वाधिक एल्बम बिक्री भएको ब्यान्ड सावित भयो ।
उनीहरूले हेभिमेटलको जग त बसाले, उनीहरू आफैं भने ब्लुज र पश्चिमेली लोकगीतबाट धेरै प्रभावित थिए । ब्यान्ड सक्रिय रहेको ११ वर्षमा कुल ८ एल्बम जारी भए, सबै एकसेएक रहे । यी एल्बम २० करोड प्रतिभन्दा बढी बिकिसकेका छन् । सुरुमा क्रिटिक्सले लेड जेपलिनको आलोचना नै गरे, सायद उनीहरू आफ्नो समयभन्दा अगाडि थिए, त्यसैले ती क्रिटिक्सले ब्यान्डलाई बुझ्नै सकेनन् । पछि तिनै क्रिटिक्सले माने, अहिलेको पश्चिमेली संगीतमा लेड जेपलिनको जबरदस्त प्रभाव छ । यो ब्यान्डले जत्तिको नयाँ नयाँ प्रयोग अरू कसैले गर्न सकेन् । सन् १९९५ मै लेड जेपलिनलाई ‘रक एन्ड रोल हल अफ फेम’ मा समावेश गरिएको थियो । त्यही बेला भनिएको थियो, सन् ६० मा बिटल्सले जे काम सुरु गरेको थियो, त्यस्तै काम सन् ७० मा लेड जेपलिनले गर्‍यो । पेजले ब्यान्डका अधिकांश गीतमा संगीत दिए भने प्लान्टले त्यसमा शब्द भरे । पछि जोनको किबोर्डमा आधारित भएर पनि गीत बने र यसलाई खुबै मन पराइयो ।
पछि यो ब्यान्डको वास्तविक परिचय टुरमा बन्यो, जति बेला उनीहरूले एकपछि अर्को टुर लगातार गरिरहे । अधिकांश टुर ‘रेकर्ड ब्रेकिङ’ खालका रहे । अझै ती टुरका क्लिप्सहरू हेर्नुपर्छ, ब्यान्ड सदस्यको जोस र त्यसलाई सुहाउँदो दर्शकको प्रतिक्रिया गज्जब छ । सन् ७० तिर रक ब्यान्डसँग जोडिएको सेक्स, ड्रग्स र रक एन्ड रोलको मन्त्र सुरु गर्नेको श्रेय पनि लेड जेपलिनलाई जान्छ । यसलाई पछि अरू ब्यान्डले पनि पछ्याए भने तिनको प्रशंसक मात्र के कम र ?
उनीहरू पनि यही मन्त्रमा होमिए । यसै कारण लेड जेपलिनको धेरै आलोचना पनि गरिन्छ । एक समय पेज र प्लान्ट कति धेरै उग्र बनेका थिए भने उनीहरूको काम नै बाधा पुर्‍याउने हुन्थ्यो । यसबारे कत्ति धेरै कथा सुन्न पाइन्छ । जस्तो जुन होटलमा बस्यो, त्यसमा रहेको टेलिभिजन झ्यालबाट बाहिर फ्यालेर उधुम मच्चाउने गर्थे । जापानमा पनि यो ब्यान्ड निकै लोकप्रिय थियो र छ, तर उनीहरूले टोकियोका होटलबाट टेलिभिजन बाहिर फ्यालेपछि जापान आउनबाटै प्रतिबन्ध जस्तै लाग्यो र त्यहाँ दोहोर्‍याएर जानै पाएनन् ।
यस्तै एकपल्ट बोनहम मोटरसाइकल चढेर आफू बसेको होटलको कोठासम्म पुगेछन् । त्यति बेला त्यहाँ कस्तो स्थिति बन्यो होला, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । वास्तवमै यी सबै पुराना कुरा भए, अहिले सम्झनुपर्ने भनेको त तिनै गीत र एल्बम नै हुन् । लेड जेपलिन ब्यान्ड बन्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात गितारिस्ट पेजको रहेको मानिन्छ । सुरुमा उनको एउटा ब्यान्ड थियो– यार्डबर्डस । यो ब्यान्डले केही समय लन्डनका क्लबमा बजाउने काम गर्‍यो ।
प्लान्टको पनि आफ्नै अलग ब्यान्ड थियो, ‘ब्यान्ड अफ जोय’ नामको । पेजले सुरुदेखि नै जोन्सलाई चिन्थे । प्लान्ट
आफ्नो ब्यान्डका गायकसँग खुसी थिएनन्, त्यसैले जोन्सको सल्लाहमा एउटा बैठक डाके, जसमा पेजलाई बोलाइयो । पछि त्यसमा बोनहम पनि थपिए । सन् १९६८ को घटना हो यो । त्यो यस्तो बैठक थियो, जसले लेड जेपलिनलाई जन्म दियो नै र यसले त्यसपछि पूरा पश्चिमेली संगीतमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लेड जेपलिन हुन्न थियो त, पश्चिमेली सगीत अहिलेको स्थितिमा हुने थिएन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ११:००
जेष्ठ १७, २०७६ कुशल तिमल्सिना
चार वर्षअघि लिभरपुलको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन प्रशिक्षक जर्गेन क्लोपले भनेका थिए, ‘यदि म चार सिजन यहाँ बसें भने मलाई विश्वास छ कि हामीसँग कम्तीमा एउटा ट्रफी हुनेछ  । ’ चार वर्षको बीचमा लिभरपुलले धेरै फाइनल खेलेको छ  ।
प्रिमियर लिगमा उपाधि नजिक पुगेको छ । क्लोपले भनेजस्तो ट्रफी भने एनफिल्ड भित्रन सकेको छैन । आफ्नो भनाइलाई सार्थक पार्ने अन्तिम मौका क्लबलाई शनिबार हुनेछ । जहाँ लिभरपुलले युरोपको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको उपाधिका लागि प्रिमियर लिग प्रतिद्वन्द्वी टोटनह्यामसँग खेल्दै छ ।
अक्टोबर सन् २०१५ मा लिनफिल्ड पुगेपछि क्लोपको टिमले लिग कप फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटी, युरोपा लिग फाइनलमा सेभिया र गत सिजन च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिडसँग पराजित हुँदै उपाधि विमुख भएको थियो । यस सिजन ९७ अंक जोडेर पनि लिभरपुलले प्रिमियर लिगको उपाधिमा म्यानचेस्टर सिटीलाई माथ दिन सकेन ।
आइतबारको फाइनलपछि लिभरपुल म्यानेजर क्लोप र टोटनह्यामका म्यानेजर माउरिसियो पोचेटिनो दुवैका लागि ट्रफीको खडेरी तोड्ने अवसर हुनेछ । यी दुई विश्व फुटबलमा उच्च रेटेड प्रशिक्षकमध्येका हुन् । उनीहरूले आफू आबद्ध क्लबका लागि ट्रफीको तुलनामा खेलस्तर सुधार गरेर वाहवाही पाइरहेका छन् । सन् २०१४ मा टोटनह्याममा आबद्ध भएयता अर्जेन्टाइन प्रशिक्षक पोचेटिनोले एउटा पनि उपाधि दिलाउन सकेका छैनन् । सत्य के हो भने पोचेटिनोको आगमनअघि टोटनह्यामले इतिहासमै दुईपल्ट मात्र युरोपियन कपमा सहभागिता जनाउन पाएको थियो । उनको आगमन पनि आगामी सिजनलाई समेत गणना गर्दा टोटनह्यामले लगातार चौथोपल्ट च्याम्पियन्स लिग खेल्दै छ ।
पाँचपल्टको युरोपियन च्याम्पियनले महादेशीय प्रतिस्पर्धामा थुप्रै अविस्मरणीय क्षण कमाएको छ । तर, यही सिजन सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा महारथी टोली बार्सिलोनाविरुद्ध ४–० को पुनरागमन जितले सबैलाई छायामा पारिदिएको छ । पहिलो लेगमा लिभरपुल ३–० ले पराजित भएको थियो । उपाधिभन्दा ठूलो उत्कृष्ट प्रबन्धन भन्ने भनाइलाई क्लोपले प्रमाणित गरेकोमध्ये पछिल्लो उदाहरण हो त्यो ।
क्लोपले लिभरपुललाई पुरानो विरासततर्फ लगेका छन् । त्योभन्दा धेरै पोचेटिनोले टोटनह्यामलाई यस्तो उचाइमा पुर्‍याएका छन् कि जुन उसले अहिलेसम्म देख्न/भोग्न पाएको थिएन । टोटनह्यामले पहिलोपल्ट महादेशीय प्रतियोगिताको फाइनल खेल्दै छ । घरेलु कपलाई त्यति ध्यान नदिएकामा पोचेटिनोको आलोचना हुने गर्छ । तर, टोटनह्यामलाई कस्तो बनाउने र केमा महत्त्व दिने भन्नेबारे उनी प्रस्ट छन् ।
यो सिजन लामो समयसम्म सम्झनका लागि दुई कारण छन् । एक– टोटनह्यामको पहिलो च्याम्पियन्स लिग फाइनल र दोस्रो– ६२ हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक नवनिर्मित रंगशालामा हुन लागेको उपाधि भिडन्त ।गत वर्षको रुस विश्वकप र त्यसपछिको व्यस्त कार्यतालिकाका कारण खेलाडीहरू थकित छन् र केहीमा इन्ज्युरीको समस्या छ । टोटनह्यामका मुख्य हतियार इंग्लिस सुपरस्टार ह्यारी केनले इन्ज्युरीकै कारण क्वाटरफाइनल र सेमिफाइनल गुमाउनुपरेको थियो ।मुख्य खेलाडीको अनुपस्थितिका बाबजुद टोटनह्यामले सामुन्नेका प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै आएको छ । आम्स्टर्डममा दोस्रो हाफमा लुकास मोउराले ह्याट्रिक गरेपछि अयाक्सलाई ३–० ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको नतिजाभन्दा उत्कृष्टचाहिँ अरू कुनै छैनन् । सेमिफाइनल पहिलो लेगमा टोटनह्याम पनि १–० ले पछि परेको थियो ।‘हामी फाइनलमा पुग्छौं भनेर कसैले सोचेका थिएनन् तर, हामी आफ्नै बलबुताले यहाँ आइपुग्यौं, मेरा खेलाडीले मेरो विश्वास खेर जान दिएनन्,’ फाइनल यात्रा तय गरेपछि पोचेटिनोले भनेका थिए । स्पेनको राजधानीबाट ट्रफी उठाउने संकेत पनि पोचेटिनोले दिइसकेका छन् ।
सन् २००८ को सिजनपछि पहिलोपल्ट दुई इंग्लिस टिम च्याम्पियन्स लिगको उपाधि भिडन्तमा उत्रिँदै छन् । सन् २००८ मा म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले फाइनल खेलेका थिए । यसले च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनिस क्लबको प्रभुत्व पनि तोडेको छ । पछिल्लो पाँच सिजनमा फाइनल खेल्ने कम्तीमा १ टिम स्पेनका थिए । जहाँ चारपल्ट रियल मड्रिड र एकपल्ट बार्सिलोनाले उपाधि जितेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ १२:२४